Bug ine hunhu muTelugu inokonzeresa kurovera kusingatarisirwe muIOS | IPhone nhau
Bug ine hunhu muTelugu inokonzeresa zvisingatarisirwe muIOS
Chinhu chekutanga kutaura ndechekuti iguru ratosimbiswa naApple pacharo uye kuti mukufunga harifanirwe kukanganisa vazhinji vevashandisi veIOS, nekuti zvinoitika nemutauro wakasarudzika wechiTelugu uye hunhu kubva pauri. Mune ino kesi, pamusoro pekusimbisa kuvepo kwedhigi, Apple inodaro inogadziriswa mune inotevera vhezheni yeanoshanda system iOS 11.3.
Ichokwadi kuti nguva nenguva mabhuregi akafanana anoonekwa muIOS, yakakosha inouya mundangariro ndiyo yakakonzera tsaona pa iPhone ne iPad muIOS 11.1.2, Apple pachiitiko ichocho yaifanira kukurumidza kuvhura iyo nyowani vhezheni 11.2. kugadzirisa dambudziko. Ino nguva iyo bhaggi haina kunyanya kukura uye zvakapusa isu tichazotangazve iko kunyorera.
Iyo yewebhu webhu Mobile nyika ndiye anotarisira kutiratidza bhagi iri muvhidhiyo, asi unogona kuzviongorora wega paunowedzera hunhu kune chishandiso cheIOS, ingave iri iPhone kana iPad. Izvo zvazvinoita kutangazve iko kushanda kwatiri kushandisa, ingave mameseji kana kunyange paTwitter sezvakaratidzwa muvhidhiyo:
Kunyangwe kutumira iyi yeTelugu hunhu kune mumwe mushandisi kubva kune komputa kunokonzeresa kuti iyo iPhone iite patsva pachayo painogashira. Hatisi kutarisana nechimwe chinhu icho vazhinji vedu chatinoshandisa uye nekudaro tinogona kutaura kuti chimwe chembugs dzakatakurwa kure zvishoma zvine chekuita nekushandisa, Chaizvoizvo unofanirwa "kuimanikidza" nekutsvaga ichi chiratidzo uye uchitumira kuti chibudise.
Kune rimwe divi, taura zvatareva pakutanga kuti mabheas akaburitswa eIOS 11.3 kuratidza - sevagadziri vakati wandei vakatsanangura- kuti iyi vhezheni itsva haisisina dambudziko nechiratidzo ichi uye nekudaro bug iri rakagadziriswa. Kana mumwe munhu akakutumira ichi chiratidzo uye yako iPhone kana iPad yotangazve, chinhu chete chaunogona kuita bvisa meseji ichikurumidza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Bug ine hunhu muTelugu inokonzeresa zvisingatarisirwe muIOS
Izvo zvinoitikawo paMacOS
Ndapota, ndine Iphone 6s uye vakanditumira chiratidzo ichi. Iyo iphone yakamira kushanda ipapo uye yatanga patsva pachayo, asi haina kubatidza zvachose asi iyo skrini inoramba isina chinhu neapuro logo. Chii chandingaite ??? zvinokurumidza ndapota
Iwe unofanirwa kudzima meseji Paula, mune application ipi yavakaitumira kwauri?
Cydia anogona kunge achiuya kuCoStStar's iOS 11 jailbreak munguva pfupi